Technicolor PostWorks 'Ben Murray mitarika ny sehatra ifanakalozana ao amin'ny DOC NYC - NAB Show News by Broadcast Beat. Mpanolotra ofisialin'ny NAB Show, mpamokatra ny NAB Show LIVE
Home » News » Technicolor PostWorks 'Ben Murray hitarika sehatra iray amin'ny famoahana ao DOC NYC
Technicolor PostWorks 'Ben Murray hitarika sehatra iray amin'ny famoahana ao DOC NYC
NEW YORK- Technicolor PostWorks Ny filohan'ny Vice-President Creative Services Ben Murray dia hametraka adihevitra amin'ny alàlan'ny fanomanana sarimihetsika hozaraina amin'ny DOC NYC PRO amin'ny herinandro ho avy, izay mifandraika amin'ny fetiben'ny sarimihetsika DOC NYC. I Murray dia hiaraka amin'i John Campbell, mpiara-miombon'antoka sady mpitantana ny ao Buffalo 8; mpamokatra / talen'ny blair Foster of Productions, ary mpanatontosa sarimihetsika Alysa Nahmias, mpanorina ny Ajna Films. mitondra ny lohateny hoe Fandalinana ny toe-javatra: Manomana ny sarimihetsika ho an'ny famaritana, ny fotoam-pivoriana dia natao ny Talata, Novambra 13 amin'ny 3: 45 pm ao amin'ny Ivontoerana IFC.
Miaraka amin'ny fampivoarana ny tolotra maoderina sy ny sehatra tranonkala, ny mpilalao sarimihetsika ankehitriny dia manana safidy maro kokoa noho ny tamin'ny fotoana nizaran'izy ireo ny sarimihetsika, saingy ireo izay tsy manomana amim-pitandremana dia afaka manao fahadisoana sarotra ary tsy hahatratra ny vokatra tsara indrindra. "Hanolotra toro-hevitra ny serasera fa tsy amin'ny fiomanana ara-teknika fotsiny, fa amin'ny asa rehetra mandeha amin'ny fizarana horonantsary", hoy i Murray. "Tafiditra ao anatin'izany ny fandaharam-pianarana, ny fakam-bozaka manentana sy miara-miasa amin'ny mpivarotra mba hahazoana ny teny."
Ny mpandray anjara:
John Campbell dia mpanorina ny JCINTIME, LLC, orinasam-pamokarana sy orinasa mpamokatra, ary mpiara-miombon'antoka iray ao amin'ny Buffalo 8, BondIt Media Company ary orinasa media iray manontolo amin'ny fampivelarana, famokarana, famolavolana serivisy manokan'ny kaompania. Izy no mitantana ny filma sy ny fahitalavitra, mpanoratra ary mpilalao sarimihetsika. Anisan'izany ny mpamokatra Zazalahy, tovovavy iray, nofy, voalahatra ary ny fanadihadiana Ny hoavy malaza. Namokatra ihany koa ny Diabe 2018 tao amin'ny Fetiben'ny sarimihetsika Washington.
Blair Foster nandresy roa Emmy Awards noho ny asany momba ny Academy Award- horonantsary nandresy Taxi mankany amin'ny faritra matevina ary koa ny Emmy ho an'i Martin Scorsese George Harrison: Miaina ao amin'ny Tontolon'ny Fananana. Tao amin'ny 2017, nitarika sy namokarana, niaraka tamin'i Alex Gibney, Rolling Stone: Tantara avy amin'ny Edge ho an'ny HBO. Namokatra ihany koa ilay fanadihadiana Netflix Get Me Roger Stone izay nalaza voalohany tao amin'ny Festival Festival Film Festival Tribeca. Anaram-bola hafa Sinatra: na tsy misy na inona na inona, Mr. Dynamite: Ny fiakaran'i James Brown, Ny tantaran'ny voromahery, Manangona Tsiambaratelo: Ny Tantaran'i Wikileaks ary Park Avenue: vola, hery ary ny American Dream.
Alysa Nahmias dia fandresena loka mpanatontosa sarimihetsika izay manana ny laharana voalohany amin'ny baiko, Spaces Unfinished (niara-niasa tamin'i Ben Murray), nahazo ny loka Independent Spirit 2012, ary ao anatin'ny fanangonana maharitra ny Museum of Modern Art, New York. Amin'ny maha mpamokatra mpamorona azy, dia ahitana ny lisitr'izy ireo korontana, Tsy misy mazava sy tsy misy tany na aiza na aiza, Adin'ny Faun iray: Tanaquil Le Clerq ary Shield sy Spear. Ny asany dia naseho tamin'ny fetibe sy fampiratiana manerantany, anisan'izany ny Sundance, Berlinale, SXSW, HotDocs, Sheffield Doc / Fest, CPH: DOX, ary ny Fikambanana Film an'ny Sound + Vision ao Lincoln Center, ary navotsotra tany Etazonia sy Angletera.
Ben Murray dia filoha lefitra, Creative Services ao amin'ny Technicolor PostWorks NY. Ny mpanjifany tsy tapaka dia i Ken Burns, Alex Gibney, Michael Moore ary Martin Scorsese. Ny sehatra voalohany mitarika azy, Spaces Unfinished, dia nandresy ny loka Independent Spirit 2012 ary nikarakara fety sy fifaninanana eran-tany. Nanangana ny The Room izy, orinasa mpamokatra orinasam-pivarotana izay miara-miasa amin'ny Deluxe sy Technicolor alohan'ny hahazoan'ny Technicolor PostWorks ao amin'ny 2012. Izy dia manana BFA amin'ny famokarana sarimihetsika sy fahitalavitra avy amin'ny Tisch School of the Arts ao New York University ary kandidà amin'ny MBA any Wharton School, University of Pennsylvania.
Mpanohana efa ela momba ny horonantsary fanadihadiana sy tsy miankina, The Technicolor PostWorks dia nanolotra tolotra fandefasana sarimihetsika ho an'ny horonantsary fijerena horonan-tsary efatra tamin'ny fetiben'ny sarimihetsika DOC NYC tamin'ity taona ity. Anisan'izy ireo ny:
Inona no nolazainy: ny karazana Pauline Kael (fanoritsoritana an-tsoratra, famariparitana loko sy famotsorana).
The Sentence (fanoritsoritana an-tsoratra, famariparitana loko sy famotsorana).
Heloka + sazy (fanoritsoritana an-tsoratra, famariparitana loko sy famotsorana).
Breslin sy Hamill: Artista farany (fanoritsoritana an-tsoratra, famariparitana loko sy famotsorana).
Technicolor PostWorks New York no East Coast feno indrindra nomerika ny sary mihetsika sy ny famokarana lahatsoratra-toerana, mampiasa ekipa iray miavaka ny famoronana mpanakanto, injeniera sy ny tetikasa mpitantana mba hanompo ny mpanjifa amin'ny alalan'ny horonan-tsary sy TV dingana famaranana.
Technicolor PostWorks New York manome loharano feno iray isaky ny lahatsoratra takina, anisan'izany in-vanim-potoana nomerika dailies, sarimihetsika fitarafana sy ny famerenana amin'ny laoniny, fiaraha-miasa tsy Linear lahatsoratra sy HD/ UHD fandaharana famaranana, 4K nomerika sinema, afa-po eran-lifecycle fanohanana, sy ny horonan-tsary sy TV feno asa feo amin'ny dingana sivy Mix.
Raha mila fanazavana fanampiny, fitsidihana www.technicolorpwny.com
fampitana injeniera fampitana Engineering CES2017 Distribution doc nyc fanadihadiana sarimihetsika tsy miankina lahatsoratra famokarana SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows TV Technology Ultra HD Forum Video injeniera	2018-11-08
Previous: Ny Media Links dia mamoaka ny dikan-teny japoney amin'ny famoahana software amin'ny alàlan'ny ProMD
Next: Chapelle Calvary Modesto manetsika ny efitrano fisafoana, ny fampivoarana ny fampielezana ny Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Hey Buddy !, nahita ity fampahalalana ity ho anao aho: "Ben Murray Technicolor PostWorks hitarika sehatra iray amin'ny famoahana ny DOC NYC". Ity ny tranonkala: https://www.broadcastbeat.com/technicolor-postworks-ben-murray-to-lead-a-panel-on-distribution-at-doc-nyc/. Misaotra anao.